Malvertising: Gịnị Ka Ọ Pụtara Maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị? | Martech Zone
Malvertising: Gịnị Ka Ọ Pụtara Maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Gị?
Monday, December 5, 2016 Caroline Nwa
N’afọ na-abịa ga-abụ afọ na-atọ ụtọ maka ịzụ ahịa dijitalụ, ya na ọtụtụ mgbanwe ndị ọsụ ụzọ na ntanetị. Ntanetị nke Ihe na ịkwaga na mebere eziokwu mepụtara ikike ọhụrụ maka ịre ahịa n'ịntanetị, na ọhụụ ọhụụ ọhụụ na sọftụwia na-ewere ọnọdụ etiti oge niile. Otú ọ dị, ọ dị nwute na, ọ bụghị ihe niile a na-mma.
Anyị ndị na-arụ ọrụ n'ịntanetị na-echekarị ihe ize ndụ nke ndị cybercriminal, bụ ndị na-enweghị ike ịchọta ụzọ ọhụrụ iji banye na kọmputa anyị ma nwee mbibi. Ndị na-agba ọsọ na-eji ịntanetị eme ihe na-ezu ohi ma mepụta ọkaibe na-adịghị elu. Itefọdụ iterations nke malware, dị ka ransomware, nwere ikike nke ịkpọchi kọmputa gị dum - ọdachi ma ọ bụrụ na ịnwere oge dị mkpa na data bara uru n'ebe ahụ. Mee elu mee ala, ọ ga-abụ na nsogbu ndị a na-akpata oke ego ma ọ bụ na-emechi ụlọ ọrụ kpamkpam ugbu a dị elu karịa ka ọ dịbu.
N'iji ọtụtụ iyi egwu buru ibu na-ezo na omimi nke web, ọ nwere ike ịdị mfe ileghara ọrịa yiri ka ọ nweghị ihe ọjọọ anya, dịka mpempe akwụkwọ na - enweghị nsogbu - nri? Njọ. Ọbụna ụdị malware kachasị mfe nwere ike ịnwe mmetụta na-emebi ihe na mgbasa ozi ahịa dijitalụ gị, yabụ ọ dị mkpa na ị maara nke ọma ihe egwu niile na ọgwụgwọ.
Gịnị Bụ vertgha?
Izi ozi - ma ọ bụ mgbasa ozi ọjọọ - bụ ezigbo nkọwa nke echiche onwe onye. Ọ na-ewere ụdị mgbasa ozi ịntanetị ma ọ bụrụ na ịpịrị ya, ọ ga-ebuga gị na ngalaba nje. Nke a nwere ike ibute nrụrụ aka nke faịlụ ma ọ bụ ọbụdị ohi igwe gị.
2009 hụrụ ọrịa na NY Times website budata onwe ya na kọmpụta ndị ọbịa wee mepụta ihe a bịara mara dị ka 'Bahama botnet'; otu netwọkụ eji maka ya eji wayo na ntanetị.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ kwenyere na ịgha ụgha ka ọ pụta ìhè nke ọma iji hụ ya - ebe ọ na - ewekarị ụdị pop-pop ma ọ bụ ozi ịntanetị na - apụ apụ - nke bụ eziokwu bụ na ndị na - agba ọsọ na - aghọ aghụghọ.
Taa, ha na-eji ọwa mgbasa ozi ziri ezi ma mepụta mgbasa ozi kwenyere na ọtụtụ mgbe saịtị ahụ amataghị na ọ bu oria. N'ezie, ndị cybercriminal abụrụla ndị ọsụ ụzọ na nka ha nke na ha na-amụkwa akparamaagwa ụmụ mmadụ iji mata ụzọ kachasị mma iji duhie ndị o metụtara ma zọọ n'okpuru radar.
Ọganihu a na-enweghị atụ pụtara na mgbasa ozi ịre ahịa dijitalụ gị nwere ike iburu nje ugbu a, na-enweghị ọbụna ịma. Kere ise:
Otu ụlọ ọrụ yiri ka ha ziri ezi na-abịakwute gị ma jụọ ha ma ha nwere ike itinye mgbasa ozi na weebụsaịtị gị. Ha na-enye ezigbo ego ma ị nweghị ihe mere ị ga-eji na-enyo ha enyo, yabụ ịnakwere. Ihe ị na-amaghị, bụ na mgbasa ozi a na-eziga ọnụọgụ nke ndị ọbịa gị na ngalaba ọrịa na-amanye ha ka ha bute nje n'amaghị ama. Ha ga-ama na kọmputa ha bu oria, mana ụfọdụ agaghị eche na nsogbu ahụ bidoro site na mgbasa ozi gị, nke pụtara na weebụsaịtị gị ga-aga n'ihu na-efe ndị mmadụ ruo mgbe ụfọdụ na-egosipụta nsogbu ahụ.
Nke a abụghị ọnọdụ ị chọrọ ịnọ na ya.
Emebiela ihe na-eme a mara mma doro anya elu trajectory ebe ọ bụ na nlele mbụ ya na 2007 mgbe nsogbu Adobe Flash Player nyere ndị na-agba ọsọ ka ha gwuo mkpịsị ụkwụ ha na saịtị ndị dị ka Myspace na Rhapsody. Agbanyeghị, enwere isi okwu ole na ole n'ime ndụ ya niile nke nwere ike inyere anyị aka ịghọta etu o si mepụta.
Na 2010, Online Trust Alliance chọpụtara na saịtị 3500 na-ebu ụdị Malware a. N'ikpeazụ, e hiwere ndị ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ iji gbalịa ịlụso iyi egwu ahụ ọgụ.
2013 hụrụ Yahoo ka ọ na-ebute mgbasa ozi na-akpali akpali nke wetara otu n'ime ụdị mbụ nke ransomware ahụ e kwuru n'elu.
Cyphort, onye isi ụlọ ọrụ nchebe, na-azọrọ na malvertising ahụwo agba agba - na-agbada pasent 325 ịrị elu na 2014.
Na 2015, nke a na-akụda kọmputa mbanye anataghị ikike wee mobile, dị ka McAfee mata ha akụkọ kwa afọ.
Taa, ịgha ụgha bụ akụkụ nke ndụ dijitalụ dịka mgbasa ozi n'onwe ya. Nke pụtara, dịka onye na-ere ihe n'ịntanetị, ọ dị mkpa karịa ka ịmebe onwe gị maka nsogbu ndị na-esote.
Olee Otú Ọ Pụrụ A Iyi Egwu?
O di nwute, dika onye ahia na a onye na kọmputa onye ọrụ, gị iyi egwu si malvertising bụ okpukpu abụọ. Firstly, mkpa ka ị hụ na ọ dịghị nje adverts piggyback ụzọ ha na gị ahịa mkpọsa. Ọtụtụ mgbe, mgbasa ozi nke atọ bụ onye na-ahụ maka ego na-akwado nkwado n'ịntanetị na, maka onye nwere mmasị na ọrụ ha, nke a pụtara ịchọta ndị na-akwụ ụgwọ kachasị elu iji mejupụta oghere mgbasa ozi ọ bụla.
N'ihi nke a, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ọghọm dị n'inweta oghere oghere site na iji nkwekọrịta oge; ihe omumu a na-enye a zuru ezu karị anya nke nwere nke a tactic nke na-amụba online revenue. Na isi, ọ na-ekwu na ezigbo oge bidding -ie auction off your ad slots - na-abịa na mgbakwunye ihe egwu. Ọ na-egosi na nke a n'ihi na a zụtara mgbasa ozi zụtara na sava ndị ọzọ, na-ewepụ njikwa ọ bụla ị nwere na ọdịnaya ya.
N'otu aka ahụ, dị ka onye na-ere ihe n'ịntanetị, ọ dị mkpa iji zere ibute nje virus n'onwe gị. Ọbụlagodi na ị nwere ọnụọgụ ntanetị dị ọcha n'ịntanetị, omume nchekwa nke onwe gị dị ka ọ ga - eme ka ị tufuo data ọrụ bara uru. Mgbe ọ bụla ị na-atụle nchekwa ịntanetị, ihe kachasị mkpa kwesịrị ịbụ omume gị. Anyị ga-ekpuchi otu esi ejikwa nke a n'ihu na post.
Malvertising & Aha
Mgbe a na-ekwu maka ihe nwere ike ibute nsogbu banyere nsogbu mgbasa ozi, ọtụtụ anaghị aghọta ihe kpatara ya ji dị oke mkpa- n'ezie ị nwere ike wepu mgbasa ozi ahụ oria, nsogbu a adịkwaghị?
O di nwute, nke a abughi ikpe. Ndị na-eji Intanet eme ihe na-agbanwe agbanwe na, dịka egwu ndị na-egwu egwu na-apụtawanye ìhè, ha ga-eme ihe niile ike ha iji zere ịdaba. Nke a pụtara na na ihe anyị nwere ike ịkpọ 'okwu kachasị mma' - ya bụ, mmapụta pụtara mma ma ọ pụta ma wepụ ya tupu ọ nweta ohere ibibi ọ bụla - a ka nwere ike ihichapụ mkpọsa ahịa gị enweghị ike ịgbanwe.
Aha ndị dị n’ịntanetị na-abawanye uru, ndị ọrụ chọrọ ka ha nwee ike iche na ha maara ma tụkwasị obi na ụdị ndị ha na-enye ego ha. Ọbụna ntakịrị ihe ngosi nke nsogbu nwere ike ha ga-ahụ ebe ọzọ itinye oge na ego ha.
Tozọ Isi Chebe Onwe Gị
Ihe mantra nke ezigbo onye injinia nchekwa ọ bụla bụ: 'Nchedo abụghị ngwaahịa, kama ọ bụ usoro.' Ọ karịrị ịkọwapụta okwu siri ike n'ime sistemụ; ọ na-emepụta usoro ihe niile ka usoro nchekwa niile, gụnyere cryptography, na-arụkọ ọrụ ọnụ. Bruce schneier, Onye na-eduzi Cryptographer na Ọkachamara Nchedo Kọmputa
Ọ bụ ezie na ịkọwapụta ihe agaghị eme ihe na-adịghị mma, echiche ahụ ka bara uru. Ọ gaghị ekwe omume ịtọlite ​​usoro nke ga-anọgide na-enye nchebe zuru oke. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eji nkà na ụzụ kachasị mma, a ka nwere aghụghọ na-ezubere onye ọrụ kama kọmputa. N'ezie, ihe ị chọrọ bụ usoro iwu nche, nke a na-enyocha ma na-emelite kwa oge, karịa usoro dị iche iche.
Usoro ndị a niile dị ezigbo mkpa iji nyere gị aka ịkwado nsogbu na-arịwanye elu nke malvertising.
Na-echebe Onwe Gị na Malụzụ
wụnye a Comprehensive Nche Suite. Enwere ọtụtụ nnukwu ihe nchebe dị. Usoro ndị a ga-enye nyocha oge niile na akụrụngwa gị wee nye akara mbụ nke nchekwa ma ọ bụrụ na ị na-ebute nje.
Pịa smart. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ oge niile n'ịntanetị, ịpị njikọ ọ bụla mgbasa ozi ị hụrụ bụ nzuzu. Nọgide na saịtị ndị a tụkwasịrị obi ma ị ga-ebelata ihe ize ndụ nke ibute ọrịa.
Gbaa Ad-Blocker. Gba ọsọ mgbasa ozi ga-ebelata mgbasa ozi ị na-ahụ, ya mere, ga-egbochi gị ịpị onye bu ọrịa. Agbanyeghị, ebe mmemme ndị a na-egbo maka mgbasa ozi intrusion, ụfọdụ ka nwere ike ileghara. N'otu aka ahụ, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ngalaba na-egbochi iji ad-ngọngọ mgbe ị na-enweta ha.
Gbanyụọ Flash na Java. A na-enyefe nnukwu kọmputa nke malware na kọmputa ngwụcha site na nkwụnye ndị a. Iwepu ha n’emepụkwa nsogbu ha.
Ikpuchido Mgbasa Ozi Dijitalụ Gị na Ọzịza
Wụnye ihe mgbakwunye antivirus. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji saịtị WordPress maka ahịa, enwere ọtụtụ nnukwu nkwụnye si n'ebe ahụ nwere ike inye nchebe mgbochi nje raara onwe ya nye.
Jiri nlezianya na-akwado mgbasa ozi. Site n'iji ezi uche, ọ nwere ike ịdị mfe ịchọpụta ma ọ bụrụ na mgbasa ozi ndị ọzọ dị obere. Atụla egwu imechi ha mgbe ị na-ejighị n'aka.
Chedo ogwe nlekọta gị. Ma ọ bụ mgbasa ozi mmekọrịta, ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ozi ịntanetị gị, ọ bụrụ na onye na-egwu egwu nwere ike ịbanye na nke ọ bụla n'ime akaụntụ ndị a, mgbe ahụ ọ ga-adịrị ha mfe ịgbanye koodu obi ọjọọ. Idebe okwuntughe gị dị mgbagwoju anya ma nwee nchedo bụ otu n'ime nchekwa kachasị mma megide nke a.
Remote nche. E nwekwara nnukwu ihe egwu nke cybercriminals nwere ike ịnweta akaụntụ gị site na netwọọdụ WiFi ọha na eze na-enweghị nchebe. Iji Virtual Private Network (VPN) mgbe ọ bụla na ihe ọ bụla ga-ezipụ data gị site na ịmepụta njikọ dị nchebe n'etiti gị na sava VPN.
Malvertising bu nkpasu iwe nke ndi n’ire ahia n’iru nile; otu nke na-adịghị ele anya na-aga ebe ọ bụla oge adịghị anya. Ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịma ihe ọdịnihu ga-abụ n’ihe gbasara malware, ụzọ kachasị mma anyị nwere ike isi nọrọ n’ihu ndị na-eme ihe ọjọọ bụ ka anyị na ndị ọrụ ịntanetị ibe anyị na-ekerịta akụkọ na ndụmọdụ anyị.
Ọ bụrụ n’inweela ahụmịhe na malvertising ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke nchekwa ahịa dijitalụ, hụ na ị ga-ahapụ ikwu okwu n’okpuru! Echiche gị ga-arụ ogologo oge iji nyere aka mepụta ọdịnihu dị n'ịntanetị dị nchebe maka ndị ahịa na ndị ọrụ.
Caroline bụ onye edemede na ọdịnaya ahịa maka Echiche doro anya. Ọpụrụiche na nchekwa ịntanetị, ọ maara maka mmebi nke malware nwere ike ime na mkpọsa ịntanetị gị. Ọ maara nke ọma na egwu dị n'ịntanetị na ikike ndị na-agba ọsọ na-apụnara ebe nrụọrụ weebụ na usoro nkwalite. Dịka onye na-azụ ahịa ahịa, ọ na-anụ ọkụ n'obi ịkọkọrịta ahụmịhe ya na ndị nwere otu uche iji mee ka ịntanetị bụrụ ebe dị nchebe karị.